MEO Go 3.16.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.16.10 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး MEO Go
MEO Go ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
O MEO Go é o serviço que dá acesso à sua TV do MEO através do tablet, smartphonesePC.
Instale gratuitamenteaApp MEO Go como parte do seu pacote MEO,eutilize sem custos adicionais através da Internet de sua casa (pacotes MEO ADSL ou MEO Fibra). Para aceder em qualquer rede MEOeem qualquer lugar subscreva o MEO Go Multi em mymeo.pt (“ServiçoseAplicações” > “MEO GO”)eusufrua da oferta do primeiro mês. O MEO Go Multi não gasta internet na Rede Móvel MEOenos hotspots MEO WiFi.
• Ver mais de 120 canais em direto, incluindo todos os canais nacionais, desporto, informação, infantis, filmeseséries
• Alugar filmes no VideoClube
• Ver conteúdos dos serviços Premium subscritos na TV (Disney on Demand, Cartoon Network, Karaoke, Campo Pequeno)
• Partilhar vídeos do YouTube paraaTV
A app MEO Go está disponível para tabletsesmartphones com sistema operativo Android 4.4 ou superior.
Para utilizaraApp MEO Go, faça login com os seus dados da Área de Cliente. Se ainda não está registado, acedaameogo.pt.
Ao instalar esta aplicação, estáaaceitar as Condições de Utilizaçãoea Política de Privacidade do MEO Go disponíveis em meogo.pt.
MEO Go သည်သင်၏ MEO TV ကိုတက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်ပီစီများမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
သင်၏ MEO အထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် MEO Go အက်ပလီကေးရှင်းကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းကိုသင်၏အိမ်အင်တာနက် (MEO ADSL သို့မဟုတ် MEO Fiber packages) ဖြင့်အခမဲ့သုံးစွဲပါ။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို MEO နက်ဝပ်ကိုဝင်ရောက်ရန် MEO Go Multi ကို mymeo.com (“ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပလီကေးရှင်းများ”>“ MEO GO”) တွင်စာရင်းသွင်းပြီးပထမဆုံးလကမ်းလှမ်းချက်ကိုခံစားပါ။ MEO Go Multi သည်အင်တာနက်ကို MEO မိုဘိုင်းကွန်ယက်နှင့် MEO WiFi ဟော့စပေါ့များတွင်မဖြုန်းပါ။
•အမျိုးသားရုပ်သံလိုင်းများ၊ အားကစား၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကလေးများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများအပါအဝင်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်း ၁၂၀ ကျော်ကိုကြည့်ရှုပါ
•သင်၏ MEO အစီအစဉ်တွင် Subscribed Premium လိုင်းများကိုကြည့်ပါ
•ပြီးခဲ့သည့် ၇ ရက်မှအလိုအလျောက်အသံသွင်းချက်များကိုကြည့်ပါ
•“ အခု TV ပေါ်” အတွက်အစီအစဉ်အကြံပြုချက်များကိုကြည့်ပါ။
•အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင် TV နှင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ
• VideoClube တွင်ရုပ်ရှင်ငှားပါ
•ငှားထားပြီးဖြစ်သော VideoClube ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပါ
•ရုပ်မြင်သံကြားမှအရည်အသွေးကောင်းသည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူထားသောဝန်ဆောင်မှုများမှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်း (Disney on Demand, ကာတွန်းကွန်ယက်၊ Karaoke၊ Campo Pequeno)
သင်၏ဓါတ်ပုံများပေါ်တွင် TV သို့ဓာတ်ပုံများဝေမျှပါ
• YouTube ဗွီဒီယိုများကို TV သို့မျှဝေပါ
MEO Go အက်ပလီကေးရှင်းကို Android 4.4 နှင့်အထက်ရှိသည့်တက်ဘလက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
MEO Go အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးရန်သင်၏လိုင်းအင်ဒေတာနှင့်ဝင်ရောက်ပါ။ သင်မှတ်ပုံမတင်ရသေးပါက meogo.pt သို့သွားပါ။
MEO (သို့) MEO WiFi မိုဘိုင်းကွန်ယက်ပြင်ပမှသွားလာမှုကိုကောက်ခံပါမည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သင်၏အော်ပရေတာနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဤလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် meogo.com တွင်ရရှိနိုင်သော MEO Go သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုသင်လက်ခံပါသည်။
MEO Go အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MEO Go အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MEO Go အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MEO Go အား အခ်က္ျပပါ
webxmasterx စတိုး 1.24k 661.26k
MEO Go ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MEO Go အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.16.10
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.telecom.pt/pt-pt/Paginas/politica-privacidade.aspx
App Name: MEO Go
Release date: 2019-10-14 06:43:41
လက်မှတ် SHA1: EE:A2:C3:97:23:6A:AF:14:71:05:34:31:49:7D:F4:DD:24:E6:AB:CC
အဖွဲ့အစည်း (O): Portugal Telecom
နယ်မြေ (L): Aveiro
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Aveiro
MEO Go APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ